वित्तीय क्षेत्रमा रोजगारीको सुनौलो अवसर : आधा दर्जन बढीमा भ्याकेन्सी ~ Banking Khabar
वित्तीय क्षेत्रमा रोजगारीको सुनौलो अवसर : आधा दर्जन बढीमा भ्याकेन्सी
बैंकिङ खबर । वित्तीय क्षेत्रमा करिअर बनाउन चाहनेहरुका लागि ठूलो अवसर खुलेको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न पदका लागि भ्याकेन्सी खुलाएका छन् । अनुभव नभएकाहरुका लागि अनुभव बटुल्ने अवसरका साथै अनुभवीहरुलाई करिअर बनाउने सुनौलो अवसर रहेको छ ।
पोखरा फाइनान्सले केही सुपरभाइजर वा जुनियर अफिसर, एसिस्टेन्ट वा सिनियर एसिस्टेन्ट र केही जुनियर एसिस्टेन्ट मागेको छ । तीन वटै पदका लागि कम्तीमा मेनेजमेन्ट वा अर्थशास्त्रमा स्नातक उतीर्ण गरेको हुनुपर्छ । सुपरभाइजर वा जुनियर अफिसरका लागि पाँच वर्ष र एसिस्टेन्ट वा सिनियर एसिस्टेन्टका लागि तीन वर्षको अनुभव मागिएको छ । आवेदन दिने म्याद चैत्र १० गतेसम्म रहेको छ ।
घरेलु लघुवित्तले केही संख्यामा बरिष्ठ सहायक वा सहायक लेभलको शाखा प्रबन्धक र कनिष्ठ सहायक वा प्रशिक्षार्थी मागेको छ । शाखा प्रबन्धकका लागि प्रवीणता उतीर्ण र दुई वर्षको कार्यानुभव मागिएको छ । प्रशिक्षार्थीका लागि भने एसएलसी पास भए पुग्छ र अनुभव पनि चाहिँदैन । आवेदन दिने म्याद चैत्र ७ गतेसम्म रहेको छ ।
सिभिल लघुवित्तले कनिष्ठ अधिकृत, व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी, वरिष्ठ सहायक वा सहायक र कनिष्ठ सहायक लेभलका कर्मचारीहरु मागेको छ । कनिष्ठ अधिकृत, व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थीका लागि स्नातक, वरिष्ठ सहायक वा सहायकका लागि प्रवीणता उतीर्ण वा एसएलसी उतीर्ण गरी दुई वर्षको अनुभव र कनिष्ठ सहायकका लागि एसएलसी उतीर्ण हुनुपर्नेछ । कनिष्ठ अधिकृतका लागि दुई वर्षको अनुभव पनि चाहिन्छ । आवेदन दिने म्षद चैत्र ७ गतेसम्म रहेको छ ।
नेपाल बैंकले काठमाडौँस्थित प्रधान कार्यालयमा दुई जना र प्रदेश नं. २, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. ५, कर्णाली प्रदेश तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशस्थित प्रादेशिक कार्यालयहरुमा १।१ जना सुरक्षा सुपरभाइजर (वरिष्ठ सहायक सरह)का लागि भ्याकेन्सी खुलाएको छ । बैंकले २ वर्षका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न लागेको हो । चैत्र १२ गतेभित्र सेनाको सुवेदार, प्रमुख सुवेदार, मानार्थ उपसेनानी वा सो सरहको पदबाट निवृत्तिभरणमा अवकाश पाएको पाँच वर्ष ननाघेको र उमेर ५३ वर्ष ननाघेको उम्मेदवारलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।
ग्रामीण विकास लघुवित्तले एक जना नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) मागेको छ । सीए वा व्यवस्थापन, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, गणितशास्त्र, व्यापार प्रशासन, जनप्रशासन वा कानून विषयमा स्नातक उतीर्ण र पाँच वर्षको कार्यानुभव भएका उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ । आवेदन दिने म्याद चैत्र ६ गतेसम्म रहेको छ ।
शाइन रेसुंगा डेभलपेमेन्ट बैंकले केही संख्यामा मेनेजमेन्ट ट्रेनी मागेको छ । एमबीए वा एमबीएसमा कम्तीमा जीपीए २.८० वा दोस्रो श्रेणीमा उतीर्ण व्यक्तिहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दिने म्याद चैत्र ४ गतेसम्म रहेको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले पनि आवेदन दिने अन्तिम म्याद चैत्र ४ गते राखी एक जना कम्लायन्स डिपार्टमेन्ट हेड एवम् केही संख्यामा ब्रान्च मेनेजर, रिलेसनसिप अफिसर वा मेनेजर र अपरेसन इन्चार्ज मागेको छ । कम्प्लायन्स हेडका लागि स्नातकोत्तर उतीर्ण वा स्नातक उतीर्ण सीए मागिएको छ । अन्य पदका लागि स्नातक उतीर्ण भए पुग्छ । कम्लायन्स डिपार्टमेन्ट हेड, ब्रान्च मेनेजरका लागि चार वर्ष र अन्यका लागि तीन वर्षको अनुभव मागिएको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले एक जना डेपुटी सीईओ मागेको छ । व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, फाइनान्स वा तथ्यांकशास्त्रमा स्नातक उतीर्ण भई वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापकीय तहमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभवी व्यक्तिलाई दरखास्त दिन आह्वान गरिएको छ । आवेदन दिने म्याद यही फागुन ३० गतेसम्म मात्र रहेको छ ।
मुक्तिनाथका ग्राहकहरुलाई विभिन्न व्यवसायिक संस्थाका सेवाहरुमा छुटै छुट
अर्थतन्त्रको सुपर पावर अमेरिकालाई कोरोना भाइरसको ठूलो धक्का, १९५८ पछिकै ठुलो आर्थिक गिरावट
नेपाल बैंकको खुद नाफा दुई अर्ब ५५ करोड माथि
सिद्धार्थ बैंकको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक
१२९ जनाले गरे कोरोना बिमा दाबी
बढ्न सकेन कर्जामा आकर्षण
सानादेखि गगनचुम्बी भवन बनाउन सहज
नेपालमा घरेलु तथा साना उधोग फस्टाएनन्